Na 2018, Data ga - eme ka akụ na ụba akụ na ụba pụta | Martech Zone
Olileanya nke Amamịghe echiche (AI) na-agbanwe ihe ọ bụla na - eweta ọgba aghara dị ukwuu na ahịa ahịa na 2017, nke ahụ ga-aga n'ihu na 2018 na afọ ndị dị n'ihu. Ihe ohuru dika Ndị ahịa Einstein, nke mbụ AI zuru oke maka CRM, ga-enye ndị ọkachamara n'ahịa ahịa nghọta a na-enwetụbeghị ụdị ya banyere mkpa ndị ahịa, nyere ndị na-akwado ndị ọrụ aka idozi nsogbu tupu ndị ahịa mara ha ma hapụ ahịa ịhazi ahụmịhe ruo n'ókè na-agaghị ekwe omume tupu.
Ihe ndị a bụ ihe na-eduga na ngbanwe nke na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke a na-apụghị ịghọta aghọta: ntoputa nke Nghọta Economy. Dị nnọọ ka oge ọrụ ụlọ ọrụ si webata akụ na ụba na -emepụta ihe nrụpụta, Oge Ọmụma na-ebugharị akụnụba Insights, yana data na-enye mmanụ. Ngwaọrụ AI kachasị mma nwere ike ịgbanwe data dị iche iche ka ọ bụrụ ihe ngosi.
Mana ọ dị mkpa iburu n'uche na, ọ bụ ezie na ọ nwere ọkaibe, na isi ya, AI bụ mmemme ngwanrọ, ma ọ bụrụ na data etinyere n'ime ya ezughi oke ma ọ bụ na-ezighi ezi, ogo nke mmepụta ga-ebelata. Iji mezuo nkwa AI, ndị na-ere ahịa kwesịrị ịchọ ụzọ iji chịkọta data, tinye ụkpụrụ, melite ozi ahụ ma hichaa data ahụ dịka o kwesiri.
Ọ dị ezigbo mkpa ka ị nwee ike ịmata njirimara data ma gbanwee data n'ime nghọta. Ọ bụ ezie na Insights Economy bụ ihe na-apụta, mmanụ dị mkpa iji mee ka ọ gaa n'ihu doro anya: data dị elu. N'ime afọ na-abịanụ, ụlọ ọrụ ndị ọzọ ga-emejuputa usoro ihe anọ dị ka nke a iji nweta ogo data ha chọrọ ịmepụta nghọta na-agbanwe egwuregwu:
Nzọụkwụ 1: Ime atụmatụ - Ndị na-ere ahịa na-eji data akụkọ ihe mere eme iji mepụta atụmatụ na nke a, na-arụ ọrụ na ahịa iji chọpụta ihe mgbaru ọsọ ma chọpụta nha nha azụmahịa, ibute olu na ọsọ dị mkpa iji mezuo ebumnuche. Mgbe ahụ, ha na-ekpebi ọnụego ntụgharị dabere na arụmọrụ gara aga wee chọpụta ihe ha kwesịrị ime (dịka, ole ndị na-eduga n'ịmepụta, ezigbo ahịa ahịa, wdg) iji nweta ihe mgbaru ọsọ ugbu a.
Nzọụkwụ 2: Inweta - Nzọụkwụ a, ndị na-ere ahịa na-enyocha ọrụ mkpọsa iji chọpụta ọganihu ha na ebumnuche na nghọta nghọta. N'ụzọ dị otú a, ha nwere ike ịgbanwe data n'ime nghọta iji mepụta usoro nzaghachi. Otu ihe atụ nke a bụ “ị pụkwara ịmasị” ngwaahịa na-atụ aro ecommerce nyiwe na-enye, nke a na-emelite dịka data ọhụrụ na-abanye.
Nzọụkwụ 3: kachasị - Dị ka aha ahụ na-egosi, nzọụkwụ a gụnyere mmụba nke usoro na-aga n'ihu, dị ka inye aka n'etiti ahịa na ahịa. Dị ka ozi ọhụrụ na-abata, ndị na-ere ahịa na-achọpụta usoro na-eme nlezianya nyocha ma chọpụta usoro ha nwere ike iji melite nsonaazụ. A na-edozi usoro, a na-atụlekwa ihe ndị ọ rụpụtara.
Kwụpụ 4: Inyocha - N'ime usoro a dị oke mkpa, ndị na-ere ahịa na-enyocha mmemme ha ma chọpụta nke mkpọsa mepụtara nloghachi kachasị elu. Ha na-elele ọwa, izi ozi na ihe ndị ọzọ iji chọpụta ROI ka ha nwee ike ịhazi mkpọsa n'ọdịnihu dabere na usoro gosipụtara nke ọma. Ihe omuma a chikotara na uzo a sitere na nghota data weputara.
Dika otutu ndi isi ahia na-achoghari na Insights Economy, choro ka ulo oru bido itinye data na usoro ihe omuma dika ihe omuma CRM ha ma tinye usoro ndia. AI bu ihe di nkpa na mgbanwe nke ahia, mana o choro data ngbasa ozi iji rụọ ọrụ dika ebumnuche ya, nke putara na ahia na ahia choro otu uzo nke eziokwu data.
Mgbe ịre ahịa na ire ahịa na-eji ngwakọ ngwakọ a na-ahụkarị, ndị otu a nwere ike ịrụ ọrụ ọnụ nke ọma, na-eji usoro ndị edepụtara n'elu iji mee ka data dị elu na-abawanye oge niile - ma na-emewanye nghọta bara uru. Ikike igosipụta mmetụta mgbasa ozi na ịnweta data na sistemụ etiti dị ka Salesforce na-eme ka ntụkwasị obi na ịzụ ahịa na-abawanye ma na-eme ka mmekorita ndị otu na ahịa.
Yabụ, ka afọ 2018 si pụta, ụlọ ọrụ ga-aga n'ihu na-achọ azịza AI. Ọ bụ ezigbo ụzọ - ohere ọ nwere na teknụzụ AI dịka Einstein dị ịtụnanya n'ezie. Mana ọ dị mkpa icheta na data na-eme AI. Ndị ghọtara ọrụ dị mkpa nke data ma jiri atụmatụ dị ka usoro anọ a iji melite ogo ga-aga nke ọma ka akụ na ụba na-aga n'ihu.
Tags: aiAmamịghe echicheCRMahịa datanjikwa mmekọrịta ndị ahịaogo datanghọta akụ na ụbanchịkọta ahịaire ahia na ire ahiamkpọkọ ahịa